Fiainana mpanakanto :: Mizara ny andavanandrony sy fihibohana ireo artista sasany • AoRaha
Fiainana mpanakanto Mizara ny andavanandrony sy fihibohana ireo artista sasany
Sehetrasa anisan’ny lasibatry ny fisian’ny aretina “Coronavius” eto Madagasikara ny fanaovana mozika. Foana na nahemotra amin’ny fotoana tsy voafetra ny avokoa ny ankamaroan’ ny fampisehoana nokasaina hatao mba hifehezana ny fiparitahan’ity areti-mandoza hoentin’ny tsimok’aretina “Covid-19” ity. Nakatona ihany koa ireo ivon-toerana ara-javakanto sy ny toerampilanonana fanaovana seho. Tsy mivoaka fa mijanona any an-tokantranony, toy ny olom-pirenena rehetra, ny mpanakanto, araka ny toromariky ny Fitondram-panjakana. Mizara ny andavanandrony sy ny fihibohana ny sasany amin-dry zareo, amin’izao fahamehana ara-pahasalama eto amin’ny firenena izao.
Fiatrehana ny valan’aretina
Misy amin’ireo mpanakanto no mitondra ny anjara birikiny amin’ny fanampiana ny manodidina azy, toa an-dRajery, mpitendry Valiha. “ Mioty ravintsara sy kininim-potsy aho ary mizara izany amin’ireo olona amin’izay mila azy. Manana maromaro an’ireo karazan-kazo ireo ny tena ka tsara ny manome maimaim-poana satria betsaka no mila azy. Mipetrapetraka ao an-trano aho rehefa vita ny fiotazana sy fizarana”.
Ao indray ireo manarabaovao tsy tapaka, toa an’ i Farakely. “ Tsy misy azo atao fa dia miatrika ny zavamisy. Mihiboka ato an-trano ary manaraka ny vaovao rehetra mandeha amin’ny haino aman-jery”, hoy izy.
Manararaotra miketrika zava-baovao kosa ny mpanakanto sasany. “Maka aina sady mamorona hira ho an’ny taona 2021 no ataoko, amin’izao fotoana izao”, hoy i Elidiot.
Mamolavola ny mety ho endriky ny rakitsariny vaovao indray i Fara Gloum. “Mandray gitara sy mihira ao an-trano no ataoko isan’ andro. Mandinika ny lalantsaina hitondrako ny rakitsariko manaraka ihany koa aho”, araka ny teniny.
Tsy vitsy kosa ireo mpanakanto milofo amin’ny fanatevenana talenta efa ananany. “Maro ny zavatra ataoko na mihidy amantrano ato aza , toy ny fanabeazam-boho ny talenta efa ao amiko. Manandrana mamorona hira sy feon-kira vaovao aho”, hoy i Mbola Talenta.
Ao indray ireo mifantoka amin’ny famerenan-kira, toa an-dry Tsiakoraka. “Manazatra feo sy mihira no azo atao ato an-trano. Ry zalahy mpitendry kosa mandray ny zavamanenony dia samy miketriketrika eo”, hoy i Fidy, mpihira ao amin’ny tarika Tsiakoraka.
Fahafatesana mpanakanto vahiny :: Lavon’ny “coronavirus” i Manu Dibango, mpihira ny “Makossa”
Fiahiana ara-tsosialy maika :: Hozaraina vola sy sakafo ireo vahoaka sahirana